|15-12-2020| Fihaonan’ny Governemanta sy ny solombavam-bahoaka
📌Tontosa omaly 15/12/2020, nanomboka tamin’ny 10 ora sasany maraina, ny "QAG" na Fametraham-panontaniana arahim-baliny izay hifanatrehan’ny Andrim-pajakana mpanatanteraka (Governemanta) sy ireo Solombavam-bahoakan’ny Madagasikara.
Namaly ny fanasana avy amin’ny Antenimieram-pirenena ireo mpikambana rehetra teo anivon’ny governemanta, izay notarihan’ny Lehiben’ny Governemanta, NTSAY Christian.
Naneho hatrany ny fahavononany hiaino sy handray ireo soso-kevitra maro sy hetahetan’ny vahoaka notanterin’ireo solombavam-bahoaka ny eo anivon’ny governemanta.
Tamin’ny 9 ora sasany alina no nandray fitenenana i Ramatoa Pr ASSOUMACOU Elia Béatrice Minisitry ny Fampianarana Ambony sy ny Fikarohana ara-tsiansa, tao aorian’ireo fanambarana sy tatitry ny solombavam-bahoaka.
Araka izany dia nisy ny tetikasa napetraka sy paikady naroso entina hanatsaràna izany teo anivon’ny governemanta.
Teo amin’ny lafiny fampianara ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa, dia naneho ny fankasitrahana an’dRamatoa Minisitra Pr ASSOUMACOU Elia Béatrice, ireo solombavam-bahoaka tamin’ny fahatontonsan’ny fanadinana ara-panjakana Bakalorea manerana ny Nosy na teo aza ny valan’aretina Covid-19 sy ny fahavitan’ireo tetikasa lehibe entina hampandrosoana ny sehatry ny fampianarana ambony toy ny fananganana ny Oniversiten’Itasy.
Miditra ao anatin’ ny fanohizana ny asa sy ireo ezaka efa vita dia atao laharam-pahamehana ihany koa :
✔️Ny fananganana ny centre CNTEMAD any amin’ny distrikan’Ambatofinandrahana.
✔️Ny fametrahana “centre de Baccalauréat" any amin’ireo distrika izay miankina amin’ny isan’ireo kandida any Benenitra sy Midongy Atsimo. Nomarihina nefa fa tsy maintsy mametraka foana ny Ministera sy ny “Office du Baccalauréat “ ny “centre” any amin’ny kaominina izay hapetraka ho saro-dalana ho an’ireo kandida.
CCI IVATOCCI IVATOCCI IVATO